Home Wararka Waxaa bilowday Carqaladeynta Doorashadii iyo Isku Dhaceeda. Akhriso
[XOG] Waxaa bilowday Carqaladeynta Doorashadii iyo Isku Dhaceeda. Akhriso
Waxaa halkaan ka muuqata inay horaay u billaabatay arintii aan shalaay maqaalkan ka qornay oo ay ahayd inay ku heshiiyeen Farmajo, Rooble iyo Beesha Caalamka in doorashadii golaha shacbiga lugta lagu dhufto. Waxaa qof waliba u cad maanta in la bilaabay inay doorashada gasho dagaalkii ugu horreeyey, kaas oo ah xildhibaanada gobollada waqooyi oo lagu bilaabay in kuraastooda loo kala boobo si uu muran u bilowdo.
Ujeedada loo bilaabayo qaskaan ayaa waxay tahay inay doorashada gaarto Febraayo 2022 oo ay dad badani dhegaha faraha gashan doonaan waxa dhaca iyo waxa ay diyaarinayan Farmajo, Rooble, Fahad iyo Beesha Caalamka, iyadoo maanta la fududeysano digniintaan hore oo ay MOL bixineyso. Dib u akhri maqaallada MOL diginin walba oo ay bixisay waxay ku dhamaaneysay sida ay u saadaalisay, sababtu maaha inay dadka ka aqoon badan tahay ama loo waxyooda, kaliya waa ka dhiiran tahay dad badan oo fahamsan balse leh dano gaar ah oo kama baqdo inay farta ku fiiqdo waxa dhacaya iyo jidka ay hayaan.
Ma jirto, mana jirin cid ay ka qarsooneyd inaysan Farmajo iyo Xasan kheyre doorasho qabaneyn bartamhii 2017 oo ku hadaaqayeen “ Markii ugu horreysay” iyo “Annaga inta aan xukunka joogno jidkeenna nallakama leexinayo” Jidkuna waa kan oo maanta ah “ Doorasho Maya”.
Arrintaan waxay ka mid tahay qorshayaasha qarsoon ee ay wada wadaan kooxda qawlaeysatada siyaaasadeed eek u heshiiyey inuusan dalka doorasho aadin si loo gaaro bisha Febraayo 2022 oo laa yaabio doona waxa dhici doona.
Sida aad aragteen mucaridka waxay soo saareen hadal labac labac ah oo aan marnaba la qaadan la qaadin Karin sababtuna waa:
Qaar waxay horaba heshiis ula galeen Kooxdaan oo waxaa loo ballan qaaday in la siin doono meelo ay ka wax cunaan oo jagosoyin khaas ah loo baarbaari doono.
Qaar waxaa loo sheegay inay safiirro ka noqon doonaan dalalka ay ilmaha u degan yihiin.
Qaarna waxay ka mid noqon doonaan dowladda Soo socota oo waxaa taas ku sasaban Rooble oo la yiri haddii MW la dooran lahaa bishan Oktober 10 keedii adiga maanta ma ahaan lahayd RW, maanta haddii la doortana waxaad noqoneysaa qof daaqadda ka baxa oo thaqo waaya marka Maxaa kuku dadajinaya doorasho thaqo la’aan kaa dhigi karta. Taasina waa tan qancisay RW Rooble oo hadda ku jira xerada weyn ee Faramjo, bilaabayna inuu abuuro carqaladaha lagu qasayo doorashaada Gobollada waqooyi.
Maxaa keenay laba laba xildhibaan loo qabto doorashadooda 275 xildhibaan, taas waxaa laga leeyahay ujeedo ah in bishiiba afar xildhibaan oo la rabay la soo saarto, si ay u jiitando doorashada. Waxaana la garayaa Febraayo 2022 iyado la soo saartay xooga xildhibaano 10-20 ah kadib waa dhey far iyo inteen aadaa.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise maanta wuxuu ku taagan yahay waddo xaq ah oo waxaana uu leeyahay “war aan tartanno“, haddaan maanta la taageerin inay si sax ah u dhacdo doorashada G/Waqooyi waxa loo tagi doonaa in doorashada golaha shacbiga Guud ahaan ay noqoto sidii tii Kenya oo ay dad badani ku dhintaan marka boobka uu hoos ugu dago beelaha hubeysan. Cid kasta oo maanta aaminsan, ka aamusan, ama taafeersan in Doorashada Xildhibaanada G/Waqooyi waa la booki karaa oo ma hubeysna way eedi doontaa jidkaas furmay, Somaliyana waa eedi doontaa.